Myanmar OA6: Astrea : The origin ofaGoddess (Cont'd)
ကဲ ... မနေ့က Post လေးကိုဆက်လိုက်ရအောင်။ ဇာတ်သိမ်းပိုင်းပေါ့ဗျာ။
အီဂျစ်တွေဟာ Virgo ကို Isis လို့သိကြပြီး လယ်ယာကိုင်းကျွန်းနဲ့ စပါးသီးနှံ့တွေကို ကူညီစောင့်ရှောက်တဲ့ နတ်ဖုရားမပါတဲ့။ Isis ရဲ့နက္ခတ်ကိုတော့ Spica လို့ခေါ်ပြီး သူမ ကိုင်ထားတဲ့ ဂျုံခက်ကလေးနဲ့ တူတယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။ Isis လို့မခေါ်ဝေါ်ခင်ကတော့ သေခြင်း၊ ရှင်ခြင်းနဲ့ တရားမျှတမှုတို့ရဲ့မိခင် Au Set နတ်ဖုရားမလို့ သိကြပြီး အမျိုးသမီးတွေကို ပြောင်းဖူးနဲ့ဂျုံကြိတ်နည်းတွေ သင်ပေးခဲ့သူလို့လည်း အီဂျစ်တွေက ယုံကြည်ကြပါတယ်။ လူတွေနဲ့အတူနေထိုင်တဲ့ ဒီနတ်သမီးလေးဟာ တချိန်မှာတော့ Typhon မာရ်နတ် နှောင့်ယှက်လို့ လပေါ်ကို အလျင်အမြန်ထွက်ပြေးသွားရပါတယ်။ သူပြေးရာလမ်းတလျှောက်မှာ သီးနှံမျိုးစေ့တွေနဲ့ ဂျုံခက်လေးတွေ ဖရိုဖရဲ ကျကျန်နေခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီလမ်းကြောင်းကို Zodiacal Band လို့ခေါ်ပြီး တရုတ်တွေကတော့ အဝါရောင်လမ်းကြောင်းလို့ခေါ်ပါတယ်။ အဲဒီလမ်းကြောင်းဟာ နေလည်ပတ်ရာ နေလမ်းကြောင်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်လို့ အီဂျစ်စာပေတွေမှာ ရေးကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် အီဂျစ်အယူအဆကိုလက်ခံတဲ့ စာပေတွေမှာ Astrea @ Isis ရဲ့ သင်္ကေတကို ဂျုံခက်လေးကိုင်ထားတဲ့ မိန်းမပျိုလေးပုံစံကိုယူထားပြီး တခါတရံမှာ နေလမ်းကြောင်းပုံစံ စက်ဝိုင်းလေးပါ ပါတတ်ပါတယ်။ ပြောရရင်တော့ အဲဒီဂျုံခက်ကြောင့်ပဲ Astrea ရဲ့ သမိုင်းကြောင်းဟာ လိုတာထက် ပိုရှုပ်ထွေးသွားပါတယ်။
Isis ရဲ့လက်ထဲမှာ ဂျုံခက်လေးရှိတာကြောင့် လယ်စောင့်နတ်သမီး Demeter လို့လည်း တချို့နေရာတွေမှာ တိတိကျကျရေးသားထားပြီး Demeter ကို ရှေးဟောင်းရောမမြို့က နတ်ကွန်းတွေမှာတော့ Ceres နတ်ဖုရားမ လို့ရေးထိုးထားကြပြန်ပါတယ်။ ဥရောပအရှေ့စွန်းက ဒေသတွေမှာတော့ Astrea ဟာ လယ်စောင့်နတ်သမီး Demeter ရဲ့ သမီးတော် Persephone သာဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပြန်ပါတယ်။ Persephone ဆိုတာကတော့ ရောမမြို့သားတွေ Pluto လို့သိတဲ့ Hades နတ်နဂါးက ရေအောက်နန်းတော်ကို ခိုးယူခေါ်ဆောင်ခံရသူ ဖြစ်ပါတယ်။ မတူညီတဲ့ နောက်ခံသမိုင်းမျိုးစုံနဲ့ Astrea ကို နေရာဒေသနဲ့ ကြာမြင့်လာတဲ့ အချိန်ကိုမှီတည်ပြီး အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲ ခေါ်ဝေါ်လာခဲ့ကြပါတယ်။ အနာဂတ်ကို ပိုင်စိုးသူ Tyche ၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံတို့ကို စောင့်ရှောက်သူ Atargatis ၊ ပညာရှိနတ်သမီး Minerva (ရောမလိုတော့ Athena)၊ အမဲလိုက်ရင် ပူဇော်ရတဲ့ Artemis နတ်ဖုရားမ (ရောမလို Diana)၊ ရေမြေသဘာဝတရားကို အုပ်ချုပ်တဲ့ Cybele နတ်သမီး၊ Zeus နတ်မင်းကြီးရဲ့ သမီးတော် ၉ ပါးအနက်က တစ်ပါးဖြစ်တဲ့ Urania နတ်သမီး၊ ဝိုင်အရက်လုပ်နည်းကို ကောင်းစွာသိတဲ့ Erigone နတ်သမီး (Icarius ရဲ့သမီးတော်) စသည်ဖြင့် မကုန်နိုင်အောင် ကွဲပြားနေပါတယ်။ Astrea နတ်ဖုရားမကို ဂရိ၊ ရောမနဲ့ ဥရောပမှာသာမက အာရှတိုက် နဲ့ အာရှ-ဥရောပ နယ်စပ်တွေမှာပါ ယုံကြည်ကိုးကွယ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဥပမာ Virgo ကို ဟိန္ဒူတွေက Kauni ၊ အီရန် နဲ့ ပါရှားတွေက Khosha ( ဂျုံရွက်နတ်သမီး )၊ ဟီဘရူးတွေက Bethulah (သီးနှံအထွက်တိုးစေသော နတ်ဖုရားမ) စသည်ဖြင့် အစွဲပြုခေါ်ဝေါ်ကြပြန်ပါတယ်။
ကျွန်တော် လက်လှမ်းမှီသလောက် ရှာဖွေဖေါ်ပြပေးထားတာဖြစ်လို့ နေရာမျိုးစုံက အယူအဆ နဲ့ ယုံကြည်မှုမျိုးစုံ ဖြစ်နေပါတယ်။ အမှန်နဲ့အနီးစပ်ဆုံးဖြစ်အောင် တင်ပြထားပြီး အမှားပါရင်လည်း ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါလို့ တောင်းပန်ထားချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ထက်ပိုပြီး တိတိကျကျ သိရင်လည်း ဝေဖန်ထောက်ပြပေးပါလို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံး ကောက်ချက်ဆွဲရင်တော့ Astrea နတ်ဖုရားမလေးဟာ Zeus နတ်မင်းကြီးရဲ့ သမီးတော်ဖြစ်တယ်၊ အလွန်တရာ ချောမောလှပတယ်၊ အပျိုစင် စစ်စစ်ဖြစ်တယ်၊ လယ်ယာတွေကို စောင့်ရှောက်ပြီး တရားမျှတမှုကို မြတ်နိုးတော်မူတယ်၊ လူ့ပြည်မှာ အချိန်အတိုင်းအတာ တခုအထိ နေထိုင်ခဲ့တယ် ဆိုတာတွေကိုပဲ ယေဘုယျအနေနဲ့ ဆွဲထုတ်လက်ခံပေးရမယ် ထင်ပါတယ်။ ကဲ … ဒါပါပဲခင်ဗျာ။ ပုံပြင်ကြိုက်သူတွေအတွက် အိပ်ရာဝင်ပုံပြင်တစ်ပုဒ်၊ ရေးသားသူအနေနဲ့လည်း Comment ပေးခြင်းနဲ့ ထိုက်တန်တဲ့ Post တစ်ခုသာဖြစ်မယ်ဆိုရင် ကျေနပ်စရာပါပဲ။
PS. “Virgo” မှာမွေးဖွားတဲ့လူတွေရဲ့ Nature တွေ၊ Character တွေ စသည်ဖြင့်ကိုတော့ http://allaboutvirgo.blogspot.com မှာလည်း English ဘာသာနဲ့ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
Posted by Mr.Pooh @ မောင်ပွတ် at 11:30 AM
Myat Min said...
Thanks Millions for this post.I think this is very nice post!
This post contain many informations of Virgo.I think you will try hard and careful to translate.I like your ponder idea.
Thank you very much Mr.Pooh.
ဘေးက sidebar နေရာတွေမှာ ဇော်ဂျီတွေ အကုန်လိုက်ထည့်လိုက်ရင် လေဘယ်လ်နေရာတွေမှာ
မြန်မာလို မြင်ရမယ်ထင်တယ်။ သူနဂိုပေးထားတဲ့ ဖောင့်ရှိသမျှ နေရာမှာ ဇော်ဂျီဖောင့်တွေ လိုက်ထည့်
It's really an informative post although i aintavirgo.:P
Suchanice and cool blog!! I like it!
Kha Yan Pyar said...